Imikhosi yesithakazelo sabavakashi bakazwelonke | Izindaba Zokuhamba
Imikhosi yesithakazelo sabavakashi bakazwelonke
Maria | | Spain amadolobha, Izindlela zokuphunyuka
Imikhosi edumile iyingxenye yesiko nomlando wabantu abahlukahlukene abakha isifunda noma umphakathi. Ngenxa yaleli fa, ezinye zazo ziye zahlonishwa kuzwelonke, ngaleyo ndlela zaba uMkhosi Wentshisekelo Yezokuvakasha Kazwelonke. ESpain kunezinhlobo eziningi: ezenkolo, ezokubhala, ezomlando, ezabantu ...
Ukuya komunye wale mikhosi edumile kusivumela ukuba sazi idolobha noma idolobha esivakashela kulo ngomqondo ohlukile. Eyodwa lapho lonke idolobha lingena ezitaladini ukujabulela umcimbi womphakathi noma iholide ukugubha futhi okwenza isivakashi sibambe iqhaza entweni ekhetheke kangaka. ISpain inemikhosi engaphezu kuka-60 yeNtshisekelo Kazwelonke Yezokuvakasha esakazeke ezweni lonke. Ungathanda ukwazi noma yikuphi okuvelele kakhulu? Qhubeka ufunde!
1 Umshado ka-Isabel de Segura (2016)
2 UDon Juan e-Alcalá de Henares (2018)
3 Amakhaphethi weCorpus Sawdust e-Elche (2014)
4 Umkhosi wamaMoor namaKrestu, u-Alicante (1984)
Umshado ka-Isabel de Segura (2016)
ITeruel iyindawo yokuqala yomzila we-Europa Enamorada ngenxa yenganekwane edumile yabathandi baseTeruel. Lo mbono wavela esifisweni somkhandlu wedolobha lase-Aragonese sokuba newele noVerona, indawo yomdlalo owaziwa kangcono kakhulu iRomeo noJuliet kaWilliam Shakespeare.
Kusukela ngo-1997 leli dolobha liphindelela ngoFebhuwari indaba yothando ebuhlungu kaGeorge de Marcilla no-Isabel de Segura ngesikhathi soSuku Lwezithandani. Ngalezi zinsuku, uTeruel ubuyela emuva ngekhulu le-XNUMX futhi izakhamuzi zakhona zigqoke izingubo zasendulo futhi zihlobisa isikhungo somlando sedolobha ukumela inganekwane. Lo mkhosi, owaziwa ngokuthi iMishado ka-Isabel de Segura, uheha izivakashi eziningi minyaka yonke.
Ukumelwa kwendaba yothando yabathandi beTeruel kugcwaliswa uhlelo oluhlukahlukene lwemisebenzi yazo zonke izethameli. Isibonelo, umqhudelwano wemidlalo yendabuko yase-Aragon, umbukiso wemidanso yangezikhathi zasendulo, ukubuka amalambu nezinye izinkanyezi, ukugqwayiza komculo kwemililo kanye ne-pyrotechnics, ukuboniswa kwendiza kwama-raptors, i-henna workshop nokusatshalaliswa kwetiye, imidlalo nama-cucañas ezingane, isibusiso nokusatshalaliswa isobho likagalikhi, imiphakathi yokupha ngesihle kanye nokunye okude.
Singalusebenzisa lolu hambo lokuyobona Imishado ka-Isabel de Segura futhi sazi umasingcwabisane lapho kungcwatshwe khona abalingiswa bale ndaba. Kunconywa ukubhukha uhambo oluqondisiwe lwaleli mausoleum kusengaphambili ukuqinisekisa indawo, ngoba iyindawo evame ukuhanjwa kakhulu.
UDon Juan e-Alcalá de Henares (2018)
Lo Mkhosi Wentshisekelo Yezokuvakasha Kazwelonke ngumcimbi okhetheke kakhulu ukuvakashela i-Alcalá de Henares futhi uthathe ithuba lokuvakashela iCervantes Birthplace Museum, iPlaza yayo kanye neMeya yaseCalle noma iNyuvesi yayo edumile.
Kusukela ngo-1984 leli dolobha belisingatha lo mcimbi, okuyisiteji esikhulu sale ndawo esisuselwa kumdlalo othi "Don Juan Tenorio" owabhalwa ngumlobi uJosé Zorrilla.
Isigcawu esikhulu semidlalo yaseshashalazini seWorld Heritage City i-Alcalá de Henares futhi sisuselwa emdlalweni odumile kaJosé Zorrilla "Don Juan Tenorio". Ubusuku Babo Bonke Abangcwele (Novemba 1) Ubusuku bukaDon Juan, umlingiswa we-archetypal wokukhohlisa owesilisa. Umsebenzi waseshashalazini wenziwa esikhungweni esihle somlando sase-Alcalá de Henares, kulokho okwaziwa ngokuthi yiHuerta del Palacio Arzobispal, lapho izinkulungwane zabantu ziza minyaka yonke ukuzocubungula ngemikhiqizo nezigaba ezahlukahlukene zenkampani ekhethelwe lo mcimbi.
Amakhaphethi weCorpus Sawdust e-Elche (2014)
Umkhosi we-Serrín Carpet e-Elche de la Sierra (i-Albacete) wenzeka ngobusuku obandulela umkhosi wenkolo ka-Corpus Christi. Leli siko lisukela emuva ngonyaka we-1964 lapho iqembu lezakhamizi eziyishumi kuphela kuleli dolobha lenza ukhaphethi omuhle wokushefa ngemibala ngokumangala emzileni wodwendwe.
Umqondo wokuqala wavela kuFrancisco Carcelén, umthengisi wasedolobheni okwathi ohambweni lwakhe oluya eCatalonia wabheka okhaphethi bezimbali abenziwa lapho futhi wacabanga ukuthi into efanayo ingenziwa e-Elche de la Sierra, esebenzisa ama-chips asele ayekhona esigodini.
Isinyathelo samukelwa kahle kangangokuthi kusukela ngaleso sikhathi leli siko elihle ligcinwa. Kulezi zinsuku, minyaka yonke amaklabhu ababazi aqhamuka nemiklamo emisha esebenzisa wonke amathuba wobuciko anikezwa ngotwayi.
Ubukhulu bobuhle buyangezwa ekulungisisweni ngokwenkolo kwalo Mkhosi Wenzalo Yezokuvakasha Kazwelonke, okwenza lonke uhlaka lwenkomba lushintshe. Ama-Elcheños akhombisa umsebenzi, kanye nenkohliso abayenzile yokuhlobisa imigwaqo kumkhosi weCorpus Christi. Lo mzamo ubuye wahlonishwa ngokuhlukaniswa kwefa leNzalo Yesiko.
Ngesikhathi sempelasonto yaseCorpus Christi e-Elche de la Sierra, ngaphezu kokuthokozela la makhabethe anemibala ekhangayo, umkhosi uhlelwa futhi ngemisebenzi eminingi eyenzelwe zonke izethameli: amakhonsathi ebhendi noma imincintiswano yezemidlalo, ngezinye zezibonelo.
Umkhosi wamaMoor namaKrestu, u-Alicante (1984)
Imikhosi yaseCallosa d'en Sarrià ibuyele emuva ku-1860 futhi yamenyezelwa njengoMkhosi Wezintshisekelo Zabavakashi eMphakathini waseValencian kusukela ngo-1984.
Umuzwa wenkolo ukhona futhi kule mikhosi njengoba kukhona omkhulu obheke eMare de Déu de las Injurias eCallosa. Imicimbi evelele kunazo zonke ezungeze usanta ongumvikeli umnikelo wezimbali nemikhosi egujwa njengaleyo efaka abalingiswa baseBhayibhelini abamele kulo mzila.
Olunye uhlangothi lwalo Mkhosi Wezintshisekelo Zabavakashi Kazwelonke yimibukiso nemidanso yohlangothi lwamaMoor namaKrestu, yilowo nalowo egqoke imvunulo yakhe ephambili. Imidanso yasohlangothini lweMoro neyobuKrestu ingezinye zezinto eziteleka kakhulu eCallosa ngenxa yokuthi zivela futhi zehlukile. Umkhosi wombala nomculo onamabhilidi amangalisayo angahle abe yi-Asset of Local Relevance.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Imikhosi yesithakazelo sabavakashi bakazwelonke